Wararka Maanta: Arbaco, Jun 27, 2012-Madaxweynaha DKMG Soomaaliya iyo Madaxweynaha Somaliland oo lagu wado inay ku kulmaan Magaalada Dubai
Sheekh Shariif iyo Axmed Siilaanyo ayaa kulankooda wuxuu daba-socdaa shirkii toddobaadkii hore lagu qabtay duleedka magaalada London ee dhexmaray wufuudda ka kala socotay Soomaaliya iyo Somaliland.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shalay gallinkii dambe tagay magaalada Dubai, halkaasoo uu maanta kaga qayb-galayo shir looga hadlayo arrimaha burcadbadeedda.
Axmed Siilaanyo ayaa isaguna maanta u dhoofay magaalada Dubai, iyadoo labada madaxweyne ay ka hadli doonaan sidii loo sii ambaqaadi lahaa wadahadallada u billowday Soomaaliya iyo Somaliland.
Somaliland oo 20-sano ka hor ku dhawaaqay inuu ka go'ay Soomaaliya inteeda kale, ayaa waxay weli ku adkeysanayaan inaysan dib ula midoobayn Soomaaliya, iyagoo ka cabanaya tacadiyo ay sheegeen in loo geystay.
Madaxweyne Siilaanyo oo hadal ka jeediyay munaasabad lagu xusayay 26-ka Juun oo xalay ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa sheegay in gooni-isu-taagga Somaliland uu yahay mid lagama laabtaan ah, wuxuuse soo dhaweeyay wadahadalka billlowday.
Dhanka kale, madaxda Soomaalida oo shalay ka hadlay 26-ka Juun ayaa sheegay in wadahadalka billowday ay hordhac u yihiin sidii dib loogu soo celin lahaa midnimada Soomaaliya, iyadoo aan la ogeyn halka ay arrintu ku dambeyn doonto.